Sergio Ramos oo amaan ka helay mid kamid ah halyeeyadii hore ee Real Madrid | Baidoa24.com
Home CAYAARAHA Sergio Ramos oo amaan ka helay mid kamid ah halyeeyadii hore ee...
Sergio Ramos oo amaan ka helay mid kamid ah halyeeyadii hore ee Real Madrid
Kabtanka kooxda kubadda cagta ee Rael Madird Sergio Ramos ayaa amaan iyo bogaadin ka helay kabtankii hore ee Rael Madrid Fernando Hierro.
Sergio Ramos ayaa ku muteystay amaanta kaga timi Hierro bandhiggiisa wanaaagsan ee xilli ciyaareedkan.
Sidoo kale warbaahinta cayaaraha ayaa qoreysa in Ramos uu sidoo kale muteysatay amaanta kaga imaaneysa bahda isboortiga wixii ka dambeyay kulankii kooxda Ossasuna oo kamid aheyd kulamada horyaalka Laliga.
Ramos ayaa sidoo kale noqday ciyaaryahankii shanaad ee ugu safashada badnaa Real Madrid wuxuuna saftay 440 kulan.
“Xaqiiqdii Sergio Ramos waa ciyaaryahan cajiib ah, sanado kahor, daafacyada waxay heli jireen fursad ay goolal ka badan kuwo hadda ay ku dhaliyaan, badanaa waxaan ka ciyaari jirnay qadka dhexe, laakiin qarnigan 21-aad, Ramos waa ciyaaryahan aan caadi aheyn”. Ayuu yiri Fernando Hierro oo wareysi bixiyey.
“Gerard Pique sidoo kale wuxuu dhaliyay goolal badan, laakiin Sergio Ramos waa mid aan caadi aheyn, marka loo eego tirada goolasha uu dhaliyay intii uu ciyaarayay oo dhan, ha ahaato Real Madrid ama xulka qaranka Spain”. Ayuu hadalkiisa ku sii daray.
Kabtan Ramos ayaa dhaliyay 115 gool xirfaddiisa, waxaana xusid mudan in uu ka cayaaro booska dambe ama daafaca.
Previous articleIn ka badan 100 askari oo Mareykan ah oo la dhibaatoonaya xanuun dhanka maskaxda ah kaddib weerarkii Iiran
Next articleSouth West State Sets In Motion Process Of Selecting Members Of Regional Parliament